Imveliso ye-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokusetyenziswa kwabantu China Manufacturer
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine,Izigulane zeRabies zokuSebenzisa abantu,Ubungakanani obuphezulu kunye noVununu
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine,Izigulane zeRabies zokuSebenzisa abantu,Ubungakanani obuphezulu kunye noVununu
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > Imveliso ye-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokusetyenziswa kwabantu
Imveliso ye-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokusetyenziswa kwabantu
 Imveliso ye-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokusetyenziswa kwabantu
Umzekelo No.: 1ml/vial
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokusetyenziswa kwabantu
[ Igama leziyobisi ]
I-Adopted name: I-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokuSebenzisa abantu
[ Inkcazelo ]
Isitofu sokugonywa sisilungiso samanzi esenziwe kwi-rabies engagwenywanga igciwane (aGV). Intsholongwane ikhula kwiiseli zeVero ezikhutshwe kwii-microcarriers. Emva kokulima nokuvuna, ukunyuswa kwintsholongwane kugxininiswe, ingacwangciswanga yi-β-propiolactone, kwaye ihlambuluzwe ngekhamera ye- chromatography ngaphambi kokuba kudibaniswe isisombululo esifanelekileyo sokwenza isitofu. Ingumlambo omhlophe-omhlophe, ocacileyo kwaye unokuba ne-thimerosal njengonogada.
Ukuba umntu uyalunywa okanye ahlatywe yintwa enobungozi okanye ezinye izilwanyana ezinobungozi, kungakhathaliseki ubudala okanye ngesondo, amanxeba aya kuhlambuluka ngokukhawuleza (Phonsa amanxeba ngokuphindaphindiweyo ngamanzi ahlambulukileyo okanye ngamanzi esepha, uze usebenzise i-iodine tincture okanye i-ethanol ngokuphindaphindiweyo amanxeba), kwaye umntu otyhilekileyo uya kuhlanjululwa kunye nokugonya ngokuhambelana neshedyuli yokuphumla ngokukhawuleza. Abantu abasengozini yokudibanisa i-rabies virus (njengezilwanyana zezilwanyana, abalimi bezilwanyana, abasebenzi basehlathini, abasebenzi abaxhamliweyo kunye nabasebenzi kwi-laboratory laboratory) baya kugonywa emva kweshedyuli yokugonywa kwangaphambili.
[ Isenzo kwaye u se]
Imveliso inokubangela ukukhuselwa kwe-rabies intsholongwane kulabo abamkelayo emva kokugonywa. Isetyenziselwa ukuthintela izidlova.
[Inkcazo s ]
1.0 ml nganye. 1.0 ml nganye kwimizuzu yomntu omnye. Ukugonywa kwe-rabies vaccine kungekho ngaphantsi kwe-2.5 IU.
[Administration and osage d]
(1) I-muscle ye-deltoid yengalo engaphezulu yindawo ephakanyisiweyo yokulawula i-intramuscular im. Kwabantwana abancinci, banciphise isitofu kwisisipha kwisimo se-anteroexternal of the thigh.
(2) IShedyuli yokugonywa kwe-postexposure:
Ngokuqhelekileyo enye idoksi yokugonya iya kuhanjiswa kumntu ovelele ngosuku lo-0 (usuku lokuqala oko kukuthi ngaloo mini), 3 (ngosuku lwesine, ngokufanayo ngokufanayo), 7, 14, kunye no-28, ngokulandelelana, amayeza amathandathu. Abantwana baya kunyangwa ngendlela efanayo. Kucetyiswa ukuba kuphindwe kabini umthamo wokuqala wokugonya xa kukho enye yeemeko ezilandelayo:
① Abantu ngabanye bajojowe nge-rabies immunoglobulin okanye i-rabies antiserum inyanga enye ngaphambi komhla wokufumana i-rabies vaccine.
② Abo bane-immunodeficiency.
③ Abo bafumana unyango lwe-immunosuppressive (kuquka i-drug of pestima).
④ Abantu abadala okanye izigulane ezinezifo ezingapheliyo.
⑤ Ulawulo lwe-rabies lokugonya luyafumaneka kubantu abambulwayo iiyure ezingama-48 okanye emva kwexesha lokuvalela.
Ulwaphulo lwe-postexposure luya kuxhomekeka kuloluhlu olulandelayo:
Udidi I: Ezi zilwanyana ezilwanyana, zikhohliswe yizilwanyana kwizikhumba ezingenanto ngaphandle kwekhefu-Akukho unyango olwenziwe ngonyawo okanye ukulawulwa kwe-vaccine kuyimfuneko.
Icandelo II: Ababetywayo okanye baxhonywe yizilwanyana kwiikhumba kodwa bengenayo igazi; okanye ukhonkxwe kwiikhumba kunye nekhefu-I-vaccine iya kulawulwa emva kweshedyuli yokugonywa kwe-postexposure.
Udidi lwe- III: Abo abanamaqabunga angaboniyo okanye amaninzi amanqabunga ekhanda ngamagqabha egazini okanye ahlatywe ngegazi okanye i-membrane ye-mucous ehlambulukisiwe ngumlenze wesilwanyana esikrokrelwayo okanye esiqinisekisiweyo, umntu okhutshweyo uza kuthathwa ngokukhawuleza kunye ne-rabies vaccine kunye ne-antiserum ye-rabies (40 IU / kg ) okanye i-immunoglobulin (i-20 IU / kg) ngohlobo lwe-rabies ngokwe-shedding schedule schedule. Ukuba i-anatomically feasible, injecting infiltration ye-rabies antiserum okanye i-immunoglobulin iya kwenziwa ngokubanzi kangangoko kunokwenzeka kwinqwelomoya; Konke, ukuba kukho nayiphi na, iya kujojozelwa nge-intramuscularly.
(3) Ihedyuli yokugonywa kwangaphambi kwe-exposure: Ingqikithi yesithathu ibhotshi ezinikezwa ngomhla we-0, 7 no-28.
(4) Iinconywa zokukhuthaza abantu abagonyelwe i-rabies vaccine ngaphambili:
Ishedyuli yokugonywa kwe-postexposure epheleleyo iqhutywe kunyaka omnye wakutshanje: Omnye umthamo uza kunikwa ngomhla we-0 no-3, ngokwahlukileyo, xa ulunywe yizilwanyana ezirhwexwayo.
② Ishedyuli yokugonywa kwe-postexposure yaqhutyelwa ngaphambi konyaka owodwa: Yenza ishedyuli yokugonywa ngokugqibeleleyo kwakhona xa ixilwe yilwanyana elityhaxayo.
③ Ukugqiba ishedyuli yokugonywa kwe-postexposure kuqhutywe kwiminyaka emi-3 edlulileyo, kwaye ilandelwe ngamanyathelo okuphucula: I-dose enye yokugonya iya kunikwa ngomhla we-0 no-3, ngokwahlukileyo, xa ityathwa yilwanyana elityhaxayo.
④ Ishedyuli yokugonywa kwe-postexposure kunye ne-booster (s) zaqhutyelwa ngaphezu kweminyaka emithathu edlulileyo: Ishedyuli yokugonywa kwe-postexposure epheleleyo iya kuqhutyelwa xa ityunjwa yilwanyana elityhaxayo.
[Ulo r esibi]
Emva kokungena kwe-inoculation, ukunyanzeliswa kwengingqi okanye inkqubo ye-systemic ingenzeka, enokuthi ikhululeke ngokukhawuleza. Ngamaxesha onke ama-rashes angabonakala. Xa kwenzeka ezinye izimpembelelo ezingathandekiyo, ezinjengeempendulo ezenziwa ngokukhawuleza ze-anaphylactic, i-angioneurotic edema okanye i-urticaria, unyango olungumqondiso luyacetyiswa.
(1) Ngenxa yokuba izidlo zesifo sisifo esibulalayo, akukho nxamnye nokugonywa kwe-postexposure immunization.
(2) Ukugonywa kwangaphambili, akukhuthazelwanga ukugoma abantu abafanelekileyo abaneentsholongwane, izifo ezinzima, izifo ezingapheliyo, izifo zesifo esisisigxina kunye nezifo eziphazamisayo okanye nembali yokuphendula ngokuthe ngqo kwii-antibiotics kunye / okanye kwimveliso ye-biological. Kunconywa ukuba ihlehlise ukulawulwa kwegciwane lokugonywa kwabasetyhini ekukhulelweni okanye kwi-lactation, ukuba inokwenzeka.
(1) Ungayisebenzisi isiconongo ukuba isitya singabonakali, njenge-crack, ilebula engabonakaliyo, kunye nemicimbi yangaphandle.
(2) Iziphuzo ezinxilisayo, i-tea eqinile, ukutya okunamandla kunye nokunyanzelisa umzimba kuya kugwenywa emva kokujova isitofu.
(3) Ukungenwa kwesigonyilo kwindawo yesigxina akuvumelekile. Musa ukufaka isitofu nge-intravascularly.
(4) Ukukhutshwa kwefayili yesitofu sokugonywa akuvumelekanga.
(5) Sebenzisa isitofu sokugonywa phambi komhla wokuphela kokubhaliweyo kwileyibhile okanye kwibhokisi yebhokisi.
Gcina uze uthumele umkhiqizo kwi-2-8 ℃, ukhuselwe ekukhanyeni.
[Packag e ]
Izinto zokupakisha eziqhagamshelana nale mveliso ngokukhawulezileyo zi-2 ml i-flaal eyenziwe ngeglasi ye-borosilicate.
Iibhobho ezi-5 / umthamo womntu x i-dose yomntu / ibhokisi
[Ukungqinisiseka p eriod] Iinyanga ezili-12
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine Qhagamshelana Ngoku
Imveliso ye-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokusetyenziswa kwabantu Qhagamshelana Ngoku
I-Syringe Varicella Vaccine Live Qhagamshelana Ngoku
I-Syringe Varicella I-Vaccine Intenutated Qhagamshelana Ngoku
I-Syringe Varicella Vaccin egcotyiweyo Qhagamshelana Ngoku
I-Syringe Varicella I-Vaccin Vaccine I-Attenutated Qhagamshelana Ngoku
Pre-filled Syringe Varicella Vaccine Attenutated Lyophilized Qhagamshelana Ngoku
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine , Izigulane zeRabies zokuSebenzisa abantu , Ubungakanani obuphezulu kunye noVununu , Iimveliso eziqingqiweyo zeRabies Vaccine , Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine , Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS , Iimveliso ezigqityiweyo eziphezulu zeTiter Vaccination , Iimveliso ezigqityiweyo
Copyright © 2020 Changchun BCHT Biotechnology Co. Wonke amalungelo agcinwe.